Fitifirana an’i Zahid Raza : Miahiahy i Me Blaine Gibson -
AccueilRaharaham-pirenenaFitifirana an’i Zahid Raza : Miahiahy i Me Blaine Gibson
07/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Niakatra amina resaka avo dia avo tokoa ankehitriny ilay fitifirana ho faty ny masoivohon’i Malezia tetsy Tsaralalàna, Zahid Raza, ny faha-24 Aogositra lasa teo. Miahiahy ny amin’ny fisian’ny fifandraisana amin’ny fanjavonan’ilay fiaramanidina Boeing 777 sidina MH370 nitondra mpandeha miisa 239 mantsy ny mpisolovava amerikana Me Blaine Gibson, araka ny nambaran’ny hainoamanjery Aostraliana iray. Voalazan’ity mpisolovava ity tao amin’ilay gazety fa “nifanandrify indrindra tamin’ny fotoana tokony hakan’ity masoivohon’i Malezia ity (Zahid Raza) ny potik’ilay fiaramanidina ho entina any Malezia ny fitifirana ho faty azy”.
Ny faha-8 marsa 2014 no nanjavona tsy hita ity fiaramanidina Boeing 777 an’ny kaompania Malaysia Airlines ity. Tsy hitan’ny “radar” intsony anefa ilay fiaramanidina teo anelanelan’i Kuala Lumpur sy Pékin. Efa telo taona izao ny Me Blaine Gibson no nivezivezy nikaroka porofo sy ny potik’ilay fiaramanidina nanerana ny sisintanin’ny Afrika Atsinanana indrindra taorian’ny nahitana ireo potik’ilay fiaramanidina taty amin’ny sisi-dranomasin’i Madagasikara. Voalazan’ity gazety Aostraliana ity fa potika fiaramanidina miisa enina ireo tokony ho nalain’ny masoivohon’i Malezia, Zahid Raza, ho entina any Malezia. Nambaran’ity hainoamanjery vahiny ity hatrany fa nandefa diplaomaty aty Madagasikara haka ireo potika fiaramanidina ireo ny fanjakana maleziana ary hangataka vaovao manodidina iny fitifirana ho faty an’i Zahid Raza iny amin’ny manampahefana eto an-toerana.